Umbindi weSixeko oKhanyayo & neApartment eNtofontofo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDobromir
Singathanda ukukwamkela kwiCity Centre eBright & Cozy Apartment. Nangona ikwintliziyo ye-Stara Zagora, le ndlu ipholileyo ifihliwe kwingxolo yesixeko. Kumgama ohamba ngeenyawo, unokufumana iivenkile ezinkulu, imarike yasekuhlaleni, apho unokuthenga iziqhamo nemifuno esandul’ ukutsha, iivenkile zenyama, nezinye ezininzi.
Le ndlu inegumbi elinye lokulala, igumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi,
igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese, kunye ne-balcony enye. Igumbi lokulala lifakwe iwodrophu, indawo yokulala ebusuku, kunye nebhedi etofotofo. Igumbi lokulala linomabonakude ukuze ukonwabele imuvi ngelixa uphumle.
Kwakhona, kukho ukufikelela kwi-balcony ukusuka kwigumbi lokulala kunye negumbi lokuhlala. Kwindawo yokulala eyongezelelweyo, i-sofa ekwigumbi lokuhlala iguquka ngokulula ibe yibhedi.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into onokuyidinga ngokuhlala kwakho. Unokwenza ikomityi yekofu emnandi okanye upheke isidlo esimnandi - kukho zonke izixhobo ezifunekayo, izixhobo kunye nezinto zokusika. Ukuze kube lula kuwe ngokupheleleyo, kukho umatshini wokuhlamba izitya kunye nomatshini wokuhlamba.
Akukho kutshaya kuvunyelwe ngaphakathi kwindlu, kodwa ungonwabela icuba kwibalcony.
Umbuki zindwendwe ngu- Dobromir
Ukuba kuyimfuneko, iindwendwe zinokuqhagamshelana nathi ngoncedo kunye nesikhokelo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stara Zagora